ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: May 2009
"I haven't signed yet but I have agreed for another year," Ballack, 32, told BBC Sport, adding he expected Milan's Carlo Ancelotti to succeed Guus Hiddink as coach next season at Stamford Bridge.
"I haven't worked under him and I don't know him very well but you can see from the work he has done at Milan that he isasuccessful manager," Ballack said.
"It's not done yet but it looks like he will be coach."
Posted by ဆိုးသွမ်း at 10:04 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:09 AM2comments: Links to this post
မျှော်လင့်ထားတဲ့ နေ့ရက်တွေကတော့ စတင်ရောက်ရှိလို့ လာပါပြီ။ ကျနော်တို့ ချဲလ်ဆီးအနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခဲ့ရတာကြောင့် ဒီရာသီမှာလည်း ဖလားလက်မဲ့ မဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား။ ချဲလ်ဆီး စတားတွေကတော့ ဒီဖလားကို အပိုင်သိမ်းဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေသလို ၊ ပရိသတ်တွေကလည်း ရင်ခုန်နေတယ် ဆိုတာ မလွဲပါဘူး။
ကျနော်တို့ ပိုလိုချင်ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို လက်လွှတ်လိုက်ရတာတောင်မှ အင်္ဂလန်ပြည်နယ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားပြီးရင် ဒုတိယတန်ဖိုးထားကြတဲ့ အက်ဖ်အေဖလားကို သိမ်းပိုက်ဖို့ လက်တကမ်းထိ တက်လှမ်းနိင်ခဲ့တာကြောင့် ခံသာရပါတယ်။
နည်းပြ ဟစ်ဒင့်လက်ထပ်မှာ ပုံမှန်ခြေစွမ်းအပြင် ကစားအားစုစည်းမှုပါ ကောင်းလာတဲ့ ကျနော်တို့အသင်းဟာ စပါးအသင်းက လွဲလို့ မရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါဘူး။ ဒရော့ဘာ ၊ အနယ်လ်ကာ ဂိုးပုံမှန်ပြန်ရနေတာ ၀မ်းသာစရာ တချက်ပါ။ နောက်တန်းတွေကလည်း လူစုံတက်စုံဖြစ်နေပြီး အက်ဆီယန်လည်း အလယ်မှာ အေးဆေးရှိနေတာကြောင့် လမ်းပတ်ပါလာတဲ့ ချဲလ်ဆီးတိုက်စစ်ကို အဲဗာတန်တို့ ဘယ်နှစ်မိနှစ်ထ ခံနိင်မလဲဆိုတာ စောင်ကြည့်ကြတာပေ့ါ။ နောက်ပြီး ဟစ်ဒင့်ရဲ့ နုတ်ဆက်ပွဲအတွက် ချဲလ်ဆီးကစားသမားတွေကလည်း ဖလားကို ယူပေးချင်နေတာကြောင့် အဲဗာတန်တို့ရဲ့ ဘ၀ဟာ....
ကျနော် ကြိုက်တဲ့ အသင်းတွေထဲမှာ အဲဗာတန်လည်းပါပါတယ် ။ အဲဗာတန်အသင်းက တခါတလေ မထင်မှတ်တက်တဲ့ အဖြစ်တွေရှိပေမယ့် အသင်းလိုက်စုစည်းမှုအား အကောင်းဆုံး အနေအထားကို ရောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကလူတွေဖြစ်တဲ့ အာတီတာ ၊ ဂျာဂျေးကာလ်တို့ နာနေတာကြောင့် နည်းနည်းတော့ တပန်းရှုံးနေသလိုပါပဲ။ ယာကူဘူက ပြေးနှုန်းနှေးသည့်အပြင် ၊ တင်ကာဟေးလ်ကိုပါ အဖျက်ဆော့ခိုင်းနေတာကြောင့် အဲဗာတန်တိုက်စစ်က သိပ်တော့မထိရောက်နိင်ပါဘူးလို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဲဗာတန် ဖိုင်နယ်ရောက်ဖို့ ကျော်ဖြက်လာတဲ့ အသင်းတွေကို ကြည့်ြ့ပီးတော့ လေးစားမိပါကြောင်း။
ဒီကစားကွင်းမှာ အများစု အင်္ဂလန်သားတွေ ကစားနေကြပါ။ ချဲလ်ဆီး အသင်းမှာ အင်္ဂလန်သား အများစုပါဝင်သလို အဲဗာတန်မှာလည်း မနည်းဘူးဆိုတော့ ကွင်းကတော့ သိပ်စကားပြောနိင်မယ်လို့ မထင်ပါဘူး။
ချဲလ်ဆီး ၂းဝ အဲဗာတန်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:00 AM 1 comment: Links to this post
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE - 1st half homemade highlights
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE - 2nd half homemade highlights
Final whistle celebrations, on-pitch interviews and presentation
Congratulation to - FC Barcelona
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:50 AM No comments: Links to this post
၁၉ ဂိုးမြောက်နဲ့ ရွှေဖိနပ်ဆုရှင် အနယ်လ်ကာနဲ့ ဆန်းဒါးလန်းတို့ရဲ့ ပျော်ပွဲ
2008/09 ၇ာသီရဲ့ ဂိုးသွင်းအများဆုံး
ဆုရှင်ကတော့ ချဲလ်ဆီးမှ အနယ်လ်ကာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျား..........
၁၉ ဂိုးမြောက်ဂိုးကို လှပသေသပ်စွာ ကွင်းလယ်ကနေ
တစ်ယောက်တည်း လိမ်ခေါက်ပြီး သွင်းယူသွားခဲ့တာပါ။...
Hull City V Manchester United / Aston Villa V Newcastle United
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE - MotD higlights, RAR Part 1
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE - MotD higlights, RAR Part 2
credti : fred54
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:51 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:18 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:57 AM No comments: Links to this post
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE -highlights
RAPIDSHARE /// MEDIAFIRE - highlights
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:37 AM No comments: Links to this post
0-3 Touré Own-Goal
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:42 AM No comments: Links to this post
တကယ်ဆို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသွားတာပဲလေ။ လူတိုင်းက ချဲလ်ဆီးကို ဘာကြောင့်မုန်းနေတယ်ဆိုကိုတော့ ကျနော်တို့ မသိဘူး။ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ငွေကြေးတက်နိင်တယ် ဆိုပြီး ကစားသမားတွေကို လိုက်ဝယ်တယ်ဆိုပြီး အမြင်ကတ်နေကြတာလားဆိုရင်တော့ စဉ်းစားစရာပဲ။ အသင်း ၁ သင်းအောင်မြင်ဖို့ ခြောက်ပဲ တပြားနဲ့ တည်ထောင်လို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုက်သင့်သလောက်တော့ အရင်းအနှီးဆိုတာ စိုက်ထုတ်ရတာပါပဲ။
ချဲလ်ဆီး - ဘာကာပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေက ချဲလ်ဆီးဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်နဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဘောလုံးအကြောင်းများ နကန်းတလုံးနားလည်ရဲ့လား မေးလိုက်ချင်တယ်။ ဘောလုံးဆိုတာ ရသမျိုးစုံပေးတဲ့ တိုက်ပွဲတခုလိုပဲ။ တဖက်က တိုက်စစ်အရမ်းသန်နေတဲ့အချိန် ပိတ်သင့်တာကို ပိတ်လိုက်ရတယ် ၊ တဖက်တိုက်စစ် အရှိန်သေအောင် လုပ်သင့်တာကို လုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်။ ဒါကို အပြစ်ပြောနေဖို့ မလိုဘူး။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချဉ်းကပ်နေကြတာ။ ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။
သူတို့က တိုက်စစ်အရမ်းကောင်းပါတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကလည်း ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ဆော့နိင်ခဲ့တဲ့ အသင်းပဲလေ။ အီတလီ ဘာကြောင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့လည်း။ ဒါကို လူတိုင်းသိတယ်။
ကိုယ်သာလျှင် ကောင်းကြောင်း ၊ သူများအသင်းသာလျှင် ဆိုးကြောင်း ပြောနေရင် ခင်ဗျားတို့ ပါးစပ်တွေက ထမင်းမစားသင့်ဘူး။ လူတွေက ဒီခေတ်ကြီးမှာ တရားမျှတမှုကို လိုချင်ပါတယ်ဗျို့ဆိုပြီး ဖင်ကုန်းပြီး အော်နေပေမယ့် မိမိကိုယ်၌က တရားမျှမျှတတချည်းပဲ လုပ်ခဲ့တာလားဆိုတာ မျက်လုံးကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အသင်းက တိုက်စစ်မှုး ၂ ယောက်သာ အဆုံးသတ် သေချာခဲ့လျှင် ဒီပွဲဟာ ကျနော်တို့ဖိုင်နယ်ပေ့ါဗျာ။ ဒိုင်လူကြီး မမှန်တာကိုတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ တကယ်တော့ အနီတကဒ်နဲ့ ကျနော်တို့ ဖိုင်နယ်ကန်ခွင့်ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံး ခဲ့ရတာပါ။
ကျနော်တို့ တိုက်စစ်မှုးတွေ ညံခဲ့တယ်။ ဒိုင်က ဆုံးဖြက်ချက်မှားခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဘာကာနောက်တန်းက လူတွေ အနီကတ်နဲ့ ပွဲပယ်နဲ့ လူနာတာနဲ့ ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ နောက်အသင်းအတွက် ရေကန်အသင့် ကြာအသင့်ပေါ့ဗျာ။
သူများတွေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပဲ မုန်းမုန်း ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ မုန်းမုန်း ကျနော်တို့ကတော့ ထာဝရချဲလ်ဆီးပါပဲ။ “ မိုးရွာမယ်လို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်း နေပူခဲ့တာကို ကျနော်တို့ လက်ခံနိင်ပါတယ် ” ။
လောကမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲဘူးဆိုတာ ထမင်းစားတဲ့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ကြရင် ကြုံလာတဲ့ အခါ သွေးအေးအေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နိင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:27 PM4comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:05 AM No comments: Links to this post
The first part of the 2008-09 season review, covering Chelsea’s pre-season. Features news and match action.
Resolution: 720×576 (widescreen)
Split into2parts. Download both parts and open the self extracting .exe to open
part 1 =http://www.mediafire.com/file/zidimd2dmyi
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:39 PM No comments: Links to this post
ခြင်္သေ့ပြာတို့ အောင်ပွဲ ( ၃ - ၁ ) ချဲလ်ဆီး - ဖူဟမ်ဟိုက်လိုက်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:14 AM No comments: Links to this post